2016 ကာလအတွင်းလေထုထဲတွင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်သို့မဟုတ် CO2 ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအသစ်တစ်ခုကိုသမိုင်းစံချိန်ချိုးတော်မူ၏။ ဒီလိုမျိုးပဲ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃ သန်းမှ ၅ သန်းအတွင်းကမ္ဘာကြီးသည်အလားတူအခြေအနေကိုမသိရှိခဲ့ပါ။ ထိုအချိန်တွင်ကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှအပူချိန်သည် ၂ မှ ၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အကြားရှိပြီးပင်လယ်ရေသည်ယနေ့ထက် ၁၀ မီတာမှ ၂၀ မီတာပိုမိုမြင့်မားသည်။
CO2 တိုးလာခြင်း၏အကြောင်းရင်းကားအဘယ်နည်း။ မင်းကိုပြောပြမယ်
စက်မှုတော်လှန်ရေး (၁၇၅၀) မှစ၍ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်သည်ပြောင်းလဲမှုများစွာကိုခံယူခဲ့ပြီး၎င်းသည်သက်တောင့်သက်သာနေထိုင်ပြီးရှင်သန်ကြီးထွားစေရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်မြေကိုအထူး အသုံးပြု၍ သစ်တောများကိုသစ်တောပြုန်းတီးခြင်းနှင့်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကိုစွမ်းအင်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါတွေအားလုံး အစပိုင်း၌၎င်းသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့မှားသည်ကိုတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာသည်.
ကမ္ဘာ့မိုးလေ ၀ သအဖွဲ့အစည်း (WMO) ၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖင်လန် Petteri Taalas အဆိုအရ“ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များထုတ်လွှတ်မှု၊ ကျနော်တို့ရာစုနှစ်၏ကျန်ရှိသောအတွက်အပူချိန်မြင့်တက်မြင့်တက်ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်, ပဲရစ်ရာသီဥတုသဘောတူညီချက်အတွက်သတ်မှတ်ထားသတ်မှတ်ချက်အထက်။
ပုံ - WMO.int
တကယ်တော့အဆင့်တွေသာတိုးလာနေတယ်။ အကယ်၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ပမာဏတစ်သန်းလျှင် (2015 ppm) နှုန်းရှိလျှင်၊ 2016 ခုနှစ်တွင် 403,3ppm ရောက်ရှိခဲ့သည်၎င်းသည်စက်မှုမတိုင်မီကာလ၌ (၁၇၅၀ မတိုင်မီ) ၏ ၁၄၅% ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
လေထုထဲရှိ CO2 အာရုံစူးစိုက်မှုမည်သို့ကွဲပြားသည်ကိုရှာဖွေရန်သုတေသီများသည်ရေခဲအတုံးဟောင်းများကိုနမူနာ ယူ၍ ၎င်းတို့ကိုဆန်းစစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့က၎င်းကိုတားဆီးရန်အကြီးအကျယ်မလုပ်ဆောင်လျှင်၊ ငါတို့သိသောကမ္ဘာကြီးသည်နောင်လာမည့်မျိုးဆက်များနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားလိမ့်မည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သင်နှိပ်နိုင်သည် ဒီ link ကို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့သည် All-time မြင့်မားမှုအားဖြိုခွဲသည်
Totten Glacier သည်ပိုမိုမြန်ဆန်သောနှုန်းဖြင့်အရည်ပျော်နေသည်